Daawo Sawirrada: Ciidamada oo xaqiijiyay ammaanka deegaanka C/lle Biroole ee G/J/Hoose * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A A warsame	 On Sep 9, 2016
Ciidamada XDS oo ay wehliyaan kuwa Daraawiishta maamulka Jubbaland iyo AMISOM ayaa shalay la wareegey deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada hoose oo dhanka koonfureed uga beegan magaalada Kismaayo qiyaas ahaana u jira 60KM.
Deegaanka Cabdalla Biroole ayaa saldhig wayn u ahaa maleeshiyadka nabad diidka ah ee Alshabaab oo dadka shacabka ee deeganadaas degan dhibaato xoog leh ku hayey.
Ciidamada ayaa Tuulada Cabdalla Biroole si nabad galyo ah kula wareegey kadib markii ay Alshabaab isaga bexeen , ayadoo halkaasi ay dadka deegaanku si diiran ugu soo dhaweeyeen Ciidamada.
Lawareegida gacan kuhaynta deegaanka Cabdalla biroole ayaa bilow u ah hawlgalka loogu magac darey wabiga-Jubba ee deegaanada Jubbaland lagaga sifeynayo maleeshiyada Alshabaab ayadoo dhabar jab weyn ku ah naleeshiyaadka Shabaab deegaanada gacantooda kabaxey.
Ciidamada ayaa ku guuleystay iney xaqiijiyaan ammaanka deegaanka Cabdulle Biroole kaddib markii ay ka faramaroojiyeen maleeshiyaadka Shabaab. xigasho radio muqdisho